Waxyaabaha cusub ee ku saabsan Instagram waa miisaanka muuqaalka muuqaalka | Androidsis
Toddobaadkan waxaan aad u nasiib badneyn inaan helno muuqaal taas ah waxaa codsaday dad badan oo isticmaala sidaa darteed qof kastaa wuu u wareegi karaa koontooyinka barta 'Instagram'. Taageero badan oo xisaabeed Waa wax muhiim u ah shabakadda bulshada maanta, maaddaama aan la kulanno noocyo adeegyo ah oo tilmaamaya in adeegsadayaal badani ay u adeegsadaan heer xirfad iyo sidoo kale heer shaqsiyeed. Jilaa leh akoonkiisa shaqsiyeed si gaar ah ula wadaago dhammaan daqiiqadahaas qaab sawirro ah, ama mid xirfadle ah oo uu kula hadli karo kuwa raacsan si ay u bilaabaan sawir soo bandhigaya shaqada qalabka ee uu ka shaqeynayo inuu ku soo galo dabeecad doorka, waxay kudhowaad lagama maarmaan u tahay dad badan. Ugu dambeyntiina waxaan halkaan ku haynaa sidoo kale sheeko cusub oo xiri doonta toddobaadkan shabakaddan bulsheed ee caanka ah iyo moodada ah ee loo yaqaan Instagram.
Instagram ayaa lagu cusbooneysiiyay sheeko kale oo xiiso leh, tanina maahan shaandhooyin ama qalab cusub, laakiin waa muuqaal wanaagsan waxayna awood u leedahay inay ogaato inta jeer ee fiidiyoow aad wadaagtay la daawaday. Qoraal blog ah, barnaamijka ay leedahay Facebook ayaa ku dhawaaqay in dadka isticmaala ay hadda ogaan karaan imisa qof ayaa arkay video la wadaagay akoonkiisa Instagram. Tan macnaheedu waxa weeye daqiiqadda aad bilowdo fiidiyoow, waad arki kartaa sida ay caan u tahay oo qofkii ciyaaraa wuu ogaan doonaa inta jeer ee la ciyaaray Muuqaal si dhakhso leh ama goor dambe loo hirgalinayo illaa sanadkii hore, xagaagii, Instagram wuxuu bilaabay suurtagalnimada in lagu soo bandhigo fiidiyowyo qaab muuqaal ah oo ka socda shabakaddan bulshada.
1 Tirinta taranka ee fiidiyowyada
2 Fiidiyowyo badan oo dheeri ah barta Instagram
Tirinta taranka ee fiidiyowyada
Isdhaxgalka fiidiyowyada barta 'Instagram' wuxuu kuu ogolaaday inaad kasbato dakhli badan laga bilaabo kuwa loo isticmaalo in lagu dhiirrigeliyo filim cusub, sida Star Wars: The Force Awakens. Waxay sidoo kale na siisay isticmaaleyaasha inaan si dhakhso leh u bilaabi karno fiidiyoow iyadoo aan loo baahnayn inaan marinno YouTube-ka si markaa isticmaale kasta oo na soo raaca uu u ciyaari karo wixii aan soo dhignay.
Instagram ayaa sharraxaysa sheekadan cusub: «Tan iyo markii fiidiyowga la sii daayay laba sano ka hor iyo Hyperlapse iyo Boomerang la soo bandhigay, waxaad awood u yeelatay inaad sheekooyin ugu sheegto barta Instagram qaabkan. Booqashooyinka ama taranka fiidiyowga waa qaab jawaab celin ah oo fiidiyoow ah. Sababtaas awgeed ayaad u bilaabi doontaa inaad ku aragto miisaska taranka ee fiidiyowyada halka ay markii horaba ku yaalliin "Waan ku jeclahay". Haddii aad rabto inaad mar kale aragto "Waan ku jeclahay", dhagsii lambarka taranka«.
Fiidiyowyo badan oo dheeri ah barta Instagram
Instagram hadda waa iska leedahay in kabadan 400 milyan oo isticmaaleKu darista tirinta saacadda, waxaad isku dayeysaa inaad bulshadaada ka dhigato inay si aad ah u adeegsato fiidiyowyadaada. Xaddiga waqtiga ay isticmaaleyaashu ku bixinayeen daawashada fiidiyowyada 'Instagram' ayaa kordhay boqolkiiba 40, sidaa darteed kobacaas ayaa sii wadi doona inuu ahaado mid joogto ah. Fiidiyowga si loogu duubo riwaayad ama booqasho, waa in la dheeliyaa ama la daawadaa ugu yaraan saddex ilbiriqsi.
Caqli ahaan Instagram waa mid dhiirigalin leh fiidiyowyada waxaa loo adeegsadaa dano ganacsi awgood inay ka dambeyso, maadaama ay awood u yeelan doonto inay muujiso tirooyin wanaagsan si loo kordhiyo lacagaha si kor loogu qaado nooca noocan ah ee wakaaladaha xayeysiinta ama ololeyaasha xayeysiinta sida aan ku soo sheegnay filimada cusub. Sikastaba xaalku ha noqdee, Instagram waxay ufududeyneysaa mid inuu soo rogo fiidiyowyo adigoon marin YouTube ama Vine-ka, oo ay iska leedahay Twitter, kaas oo kaliya fiidiyowyadooda lagu ciyaaro muddo 6 ilbiriqsi ah
Waxa cad ayaa ah in aragtiyada badan ee fiidiyowgu leeyahay, ay inbadan ku dhiirigalinayaan qofkasta oo hela inuu sii wado ciyaarista isla markaana mustaqbalka dhow Instagram loo arki doono madal kale oo loogu talagalay fiidiyowyada. Sidoo kale Instagram way ogtahay taas way u fududahay isticmaaluhu inuu soo rogo fiidiyowyo iyadoo la kordhinayo xawaaraha isku xirnaanta iyo waxa horumar weyn ka sameeyay qalabka taleefannada iyo kiniiniyada. Waxay noqon doontaa isbeddellada soo socda ee weyn, haddii aysan hore u ahayn leh Periscope kaas oo moodada ku jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Miisaanka muuqaalka fiidiyowga ayaa noqon doona waxa cusub ee barta 'Instagram'
Monica Beteta dijo
Ma garanayo sababta laakiin ma arki karo qofka daawanaya ku-dhalintayda. Waxaan helaa Fallaaro leh tirada taranka laakiin ma arko cidda daawatay. Waan ku faraxsanahay haddii aad ii sheegto sida loo hagaajin karo.
Ku jawaab Monica Beteta